ULWANDLE KWIGUMBI COD CITRA 010025-LT-0938 - I-Airbnb
ULWANDLE KWIGUMBI COD CITRA 010025-LT-0938
I-Apartment ebekwe kwiziko lembali le-PEGLI, kwisikwere esinikezelwe kwikoloni yasePegliese eyafikelela eTabarca. Ibekwe kumgangatho wesibini wesakhiwo sembali, umxholo wokulungiswa ngononophelo odibanisa iifrescoes zesilingi kunye noyilo lwangoku kwaye oluyimfuneko, olujongene nombono oxabisekileyo wolwandle ongena kuwo onke amagumbi anemibala yawo. iindawo zokutyela kunye neevenkile kwiimitha ezili-10 Ukukwazi ukufikelela kwi-GENOA ngebhasi yenqanawa .COD CITRA 010025-LT-0938
Isiteyitimenti enekhitshi evulekileyo, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala eliphindwe kabini. Ixhotyiswe ngayo yonke into elula yokupheka kunye nokuzonwabisa I-SMART TV NETFLIX YAMAHHALA I-WI-FI FIBER OPTIC 1 I-GIGA PARC BIKE IVALIWE MAHHALA.
Ndihlala e-PEGLI ukususela ekuzalweni kwaye andiyi kufudukela kwenye indawo, e-Pegli isavakala ngathi
Kwidolophana encinci, apho wonke umntu uyazi kwaye apho izithethe zihlala zingatshintshi ngokuhamba kwexesha.
Kwiziko lembali lasePEGLI usenako ukuphefumla lo moya, kunye nabalobi abadala ababekhe bahlala phantsi.
ngaphandle kweendawo zabo zokugcina ezijonge isikwere ukucoca i-anchovies kunye nokulungelelanisa iminatha yabo;
nokuba namhlanje kukho abalobi abambalwa abaseleyo, ubukho babo busavakala.
Iindwendwe zethu unokucela ulwazi ukwenza iholide yabo phezulu, zombini imiqondiso iimyuziyam, imiboniso, iindawo umdla, kunye neendlela zokudlulisa, kwakunye neengcebiso ukulungiselela i Ligurian pesto ebalaseleyo eyenziwe ngodaka, Paolo kokuba kudidi lwesibini. kwi Pesto World Championship.
Iindwendwe zethu unokucela ulwazi ukwenza iholide yabo phezulu, zombini imiqondiso iimyuziyam, imiboniso, iindawo umdla, kunye neendlela zokudlulisa, kwakunye neengcebiso ukulungis…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Genova Pegli